Semalt Expert Anozivisa Tricks Kukudzivirira Iwe Kubva paInternet Fraud
Unofanirwa kuziva nheyo yekutengesa ufeve uye scam, zvakanaka? Izvo zviviri zvinoshandiswa zvakasiyana-siyana uye chaizvoizvo zvinoreva chinhu chimwe chete. Chirwere chinowanzoreva chinangwa chinoronga kubiridzira vanhu vasingafungi vemari yavo kazhinji nechipikirwa chechinhu chisingazomboiti kana mari ichichinja maoko. Sezvinoratidzwa nezita racho, internet scams inowanikwa pavanosangana newebhu - best smart led tv india.
Mutengi Wakatarisa Muchengetedzi we Semalt , Lisa Mitchell, anotsanangura nyaya dzekutsvaga paIndaneti kuti ugare wakachengeteka.
Ndiani ari pangozi?
Chero ani zvake anoshandisa kushandiswa kwepaIndaneti chero nguva uye kubva chero kupi zvako munyika inogona kuitika. Hazvina mhosva kuti uri kutarisa zvigaro pahuwandu hwemagariro ehutano, email kana kutaurirana pane imwe nzvimbo yekufambidzana. Kubva pakuuya kwadzo, internet yakabatsira mamirioni kuona mafirimu, kuwana mashoko, kuverenga mablog, kushanda kubva kumba uye nezvimwe zvakawanda. Zvinosuruvarisa, hutachiona hwehutachiona hwakawedzera.
Muna 2017, nhamba yehutachiona hwemhosva yakanzi iine 155% kupfuura yaive gore rapfuura (2016). Izvi hazvina kunaka. Izvi zvinotenderwa sei kuti zviitike? Zvechokwadi, isu tinofanira kunge iye zvino tava kuziva zvose zvinonyadzisa zvinoshandiswa, zvakarurama? Zvakanaka, varume vakaipa vakachenjera. Zuva nezuva vanouya nenzira itsva dzekukohwa kwavasina kudyara.
Tora muenzaniso weNigeria 419 scam..Inowanzotanga ne email kana shoko rinotumwa nemusikana ari kutambudzika. Anoreva nhema kuti ave heiress, mukuru wehurumende kana bhizimisikadzi kubva kuNigeria kana kuSierra Leone. Iye zvino heyi mubhaiti: amai vacho vangada kuti mumubatsire kuwana mari yake kubva kubhandi remukati. Sei? Nokutumira kumwe kubhadhara kwaanenge achibhadhara kubhadhara kushandiswa kwebhangi. Chii chaunowana mukudzoka? Chikamu chikuru chemari. Izvi hazvitomboiti. Kana uchinge watumira mari yacho, mukadzi wacho anonyangarika kuva mhepo yakaonda. Mune zvimwe zviitiko, vangakumbira kubhengi rako nezvekuda kuti vanoda kuendesa mari yacho kuAngeri yako. Usaita izvi. Mari yako yebhangi ichave yakakanganisa. Kuwanda kwekuti chibvumirano chinonzwika zvakanaka kuti chive chechokwadi, vamwe vanhu vanokanganisa kumhepo uye vanotamba pamwe.
Izvi zviri pachena kuti rudzi rwakanyanya kunyanya kupararira kunze uko. Muchiitiko ichi, unowana email inotarisana nehurumende kubva kubhangi rako kana sebhadharo rekubhadhara paIndaneti sePaypal. Vaizoti iyo nhoroondo yako inoda kuongororwa. Pano ivo vachakukurudzira kuti uone kubatana kana kupa mashoko ako kuitira kuti avandudze zvakafanana kwauri. Icho chinonzi phishing chekushandisa chinoshandiswa kupamba dunhu rega uye rezvemari.
Fungidzira chimiro ichi: kana mumwe munhu akaba yako kadhi rechikwereti kubva muchikwama chako, iwe ungakurumidza kushevedza bhengi kuti uvazivise. Zvinosuruvarisa, kuipa kwepabonde kwakaoma uye kwete izvo zvakananga. Zvose zvakafanana, iwe unogona kuzvidzivirira kubva pane izvi zvose nekuzivana nemhando dzose dzekutsvaga kwekombiyuta. Ichakupa rugare rwepfungwa, ruzivo rako pachako rucharamba rwakachengeteka, uye hakuna munhu achabata mari yako pasina chiremera chako. Usaparadzirwa paIndaneti. Farira kuve nyore kwe internet nehutano hwepfungwa.